Global Voices teny Malagasy » Miparitaka Any Atsimon’i Venezoela Ireo Kilasy Fianarana Tsy Misy Mpampianatra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Febroary 2016 3:30 GMT 1	 · Mpanoratra Morelia Morillo Nandika (en) i Melissa Wise, Tantely
Sokajy: Amerika Latina, Venezoela, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Sendikà, Teratany
Ankizy teratany miverina mody avy tany am-pianarana. Sary nalaina tamin'ny kaonty Flickr an'i barloventomagico, ambany fahazoandàlana Creative Commons.
Nalefa voalohany tao amin'ny bilaogin'i Morelia Morillo ito lahatsoratra ito, Ny Tantaran'ny Sisintany [Es.] .
Na tian'izy ireo aza ny asany, niala ny toeram-mpampianarany ireo mpampianatra maherin'ny 300 isa tany Gran Sabana, Venezoela, mba hitady fidiram-bola bebe kokoa any amin'ireo indostria hafa. Mandeha miala an'ireo sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa amin'ny ambaratonga fototra ireo mpampianatra — indrindra ireo avy any amin'ny olona tena teratany — mba hitady asa any amin'ireo fitrandrahana volamena sy diamondra, raha toa ireo sasany (indrindra ireo Kreôla, na ireo tsy teratany) mitady asa toy ny mpitondra fiarakaretsaka na mivarotra ny vokatra Tupperware (boaty plastika), hot dogs  (mofo voasesika sosisy) sy empanadas (mofo voasesika hena), na lasantsy.
Any amorontsiraka lavitra, eo amin'ny sisintany iraisany amin'i Brezila, na ireo mpampianatra tena mahay indrindra aza mikarama eo ho eo amin'ny 20,000 bolivars isam-bolana (20 dolara any amin'ny varomaizina, ny hany azo idirana), raha ambonimbony kelin'io ny hofan'ny efitra iray amin'ny ankapobeny. Afaka mieritreritra mandany, farafahakeliny, 500 bolivars (0,50 dolara)hafa indray, ho vidin'ny iray kilao amin'ny vovo-katsaka, ireo olona te-hihinana. Any amin'ny tanàndehibe izay tsy misy fitanterana iombonana, mitentina eo amin'ny 300 bolivars (0,30 dolara) eo ny saran-dàlana indray mandeha.
Mampiasa taham-panakalozana efatra samihafa amin'ny fotoana iray i Venezoela. Ny vokany, na tena mora be ireo zavatra, na tena lafo be tsy takatra mihitsy , miankina amin'ny taha ampiasaina. Araka ny Ivontoerana Mises, tsy maintsy hiankina amin'ny varomaizina ao aminy ireo Venezoelana mba hahatratrarany ny tinadiny amin'ny vola ivelany. Noho izany, miankina ho azy amin'ny tahan'ny varomaizina ny olona, na somary tsy dia ahazoana tombony aza io (mahatratra 900 bolivars ny iray dolara, raha toa ka 6,3-200 bolivars ny iray dolara amin'ny tsena “ofisialy”).
Tanindrazan'ny foko teratany Pemón ny Gran Sabana . Faritra itoeran'ireo karazana Fiarovana ny tontolo iainana io: Valan-javaboaharim-pirenena Canaima, ny Tsangambato Natoralin'ny Tepuyes, Faritra Atsimo Arovana ao Bolivar, ary ny Tahirin-dRano ao Ikabarú.
Nandritra ny taona maro, namoaka tamin'ny fomba mandresy lahatra tokoa ireo fikarohana nataon'ny Fikambanana Venezoelana an'i Guayana sy ny iray amin'ireo orinasa rantsa-mangaikany, Electrificación del Caroní (Edelca), fa tena mety tsara ho an'ny fizahantany sy ny fanomezana rano ho famokarana herinaratra io faritra io. Kanefa, niha-tsy voafehy intsony ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tao amin'ilay faritra.
Volana Novambra 2015. Miakatra hatrany ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany amin'ireo faritra ambanivohitra — na ao anatin'ny Valan-javaboaharim-pirenena Canaima aza. Ao amin'ny tanàna renivohitr'i Santa Elena de Uairén, misy seraseram-barotra ho an'ireo zavatra rehetra afaka eritreretina ary mitobaka ny fivarotana lasantsy eo an-toerana.
Vinavinaina ho mankany amin'ireo toerana fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ny antsasaky ny entona mivoaka eny amin'ireo tobin-dasantsy eo an-toerana, izay ahitàna filaharana lava miforona isan'andro. Amidy amin'ireo mpanjifa any Brezila indray ny antsasany ambiny amin'ny lasantsy. Mety tafakatra maherin'ny 300.000 bolivars (300 dolara) ny barika 200 litatra. Ao Venezoela, tsy mahatratra iray bolivar (0,10 dolara) akory ny iray litatra amin'ny lasantsy. Any Brezila, mitentina manakaiky ny efatra realy Breziliana (1 dolara) io.
Nanamarina ny tomponandrakitra avy amin'ny sekoly faha-4 an'ny distrika, fa ao amin'ny kaominina Gran Sabana, nandritra ny taom-pianarana 2014-2015, farafahakeliny mpampianatra 80 no nametra-pialàna. Nampitandrina anefa izy, ambonin'izany, fa mety mbola avo noho izany no tena zava-misy, indrindra fa misy ireo mpampianatra niala tamin'ny fampianarany any an-tsekoly na tsy nanapitra an-taratasy ny asany tany amin'ny Ministeran'ny Fahefàm-Bahoaka misahana ny Fampianarana.
Ho fanampin'izany, nilaza io loharano io fa, hatramin'izao, nandritra ny telo volana voalohan'ny taom-pianarana 2015-2016, farafahakeliny mpampianatra 25 no nametra-pialàna.
Tomponandraikitra iray hafa ao amin'io birao io ihany, tsy nitonona anarana, nitatitra fa mpampianatra 300 manerana ny tanàna no nametra-pialàna ny faran'ny taom-pianarana 2014-2015, nampipoaka ny tahan'ny isan'ireo mpianatra miohatra amin'ireo mpampianatra any amin'ireo vondrompiarahamonina teratany sy ireo faritry ny tanàndehibe.
Tamin'ny faran'ny taom-pianarana 2014-2015, nifamory ireo talen-tsekoly, tomponandraikitra avy amin'ny distrika, ary tomponandraikitra avy amin'ny biraon'ny ben'ny tanàna, mba hiresaka momba io toedraharaha io ary nanao taratasy ho an'ny Ministeran'ny Fampianarana, izay notarihan'i Héctor Rodríguez, mba haneho ny zava-mitranga sy hangataka mpampianatra 109 vaovao. Ho valin-kafatra, ny volana Novambra, nampidirina ireo mpampianatra vaovao miisa 83, fa mbola tsy voavaha kosa ireo olana hafa izay nitondra io olana io.
Amin'ireo tranga sasany, mbola misy ireo toerana tsy misy mpiasa. Nolazain'i Valdirene Dos Santos tao amin'ny bilaogin'ny Mujeres del Agua Foundation  hoe ao amin'ny vondrom-piarahamonina El Paují, atambatra ho anaty kilasy iray ireo mpianatra avy amin'ireo ambaratonga samihafa.
Ao amin'ny Bolivarian Comprehensive School fantatra amin'ny hoe “El Salto,” lasa ny antsasak'ireo mpampianatra. Ny sasany nisotro ronono, ireo sasany lasa niala noho ny tsy fahafahana ara-batana, ary ny sasany nametraka fialàna. Teo anatrehan'io trangan-javatra io, nisy ireo ray aman-dreny tsy maintsy nandray andraikitra tao amin'ny kilasy. Ohatra, nandritra ny roa volana izay, lasa nanao mpampianatra ambaratonga faharoa i Kámala Manjari.
Tara farafahakeliny iray volana ny fiantombohan'ny taom-pianarana ho an'ireo ambaratonga voalohany tao amin'ny sekoly ambaratonga fototra Gran Sabana, izay mifandray amin'ny El Salto, raha nangataka ny fisotroan-drononony ny mpampianatra iray ary iray hafa nangataka ny hiala noho ny tsy fahafahany ara-batana. Ny farany, nampiditra mpampianatra izay mandray 24.000 bolivars (24 dolara) isam-bolana ny Filankevitra Iombonana ao Brisas del Uairén sy ny tanànan'i Gran Sabana.
Nikatona mandra-pisian'ny filazàna vaovao ny sekoly ao amin'ny vondrom-piarahamonina teratany Las Agallas, ary ny sekolin'i Ikabarú, renivohitry ny paroasy faharoa an'ny tanàna kosa, nanomboka ny fampianarana niaraka tamin'ny fahataràna farahafakeliny iray volana, vantany vao nahavita nampiditra mpampianatra vaovao dimy — samy avy any amin'ny tanàna hafa daholo — ny Fari-pampianarana Bolivar, toa narahana filazàna hoe tsy mangataka ny hisian'ny fiovàna izy ireo ao anatin'ny valo taona manaraka.
Ao Ikabarú, faritra iray anjakan'ny indostrian'ny ministera, any amin'ny 114 kilometatra (70 miles) anaty lalantany avy any Santa Elena, mahatratra ny vidin'ny volamena roa grama ny vidin'ny akoho iray — farafahakeliny 30.000 bolivars (30 dolara). Mba ahazo ny karamany, mila mandeha any amin'ny renivohitra ny mpampianatra, mandoa saran-dalana amin'ny fiara tsizarizary (3.000 bolivars, na 3 dolara, isaky ny làlana). Ny fandoavam-bola an'ny mpampianatra rehetra dia amin'ny alalan'ny Bankin'i Venezoela mampiasa taratasim-bola (seky) daholo, izay hany manana sampana sy milina fisintonanana vola mandeha ho azy ao an-tanàna. Mahazo karatra fisintonam-bola ireo mpampianatra, fa hatramin'ny 3.000 bolivars (3 dolara) isan'andro ihany no fisitonam-bola eken'ny milina mpamoaka vola eo an-toerana, .
Manao io ireo mpampianatra sisa mijanona, ireo izay tsy nametraka fialàna, satria tiany ny mampianatra na satria efa hisotro ronono izy ireo, fa mivarotra vokatra, akanjo, lasantsy, na mamaily fiarakaretsaka ihany koa izy ireo” hoy ny tsiambaratelo nolazain'ilay tomponandraikitra iray taminay.
Fijoroana vavolombelon'ny mpivady iray
Mpivady i Nardy Torres sy David Silva, niteraka zazavavy roa, ary samy mpampianatra. Samy tia ny asany izy roa; mahatsapa izy ireo fa io no hany làlana hanompoany ireo fianakaviany sy ny fiarahamoniny. Samy nametraka fialàna tamin'ireo toerany i Nardy sy David, na izany aza, nilaza hoe noho ny “antony ara-bola.”
“Satria amin'ireo karama roa ireo, mbola tsy afaka misakafo izahay,” hoy i David manazava.
Taona iray sy tapany izay izy no nametraka fialàna. Nitàna ny toeran'ny mpandrindra ara-pivavahana tao amin'ny sekoly “Fanantenàna sy Fifaliana tao Manak Krú” izy. 36 ora isaky ny herinandro ny fepotoana niasany ary 4.500 bolivars (4,50 dolara) tamin'izany no karamany, miampy fanampin-karama noho ny asa fandrindràny.
Nandeha tany an-tsena aho ary nisy fotoana laniko manontolo ny karamako, ny ampahan'ny tahiriko ary ny tapakila cesta-ako (tapakila ahafahana mahazo sakafo nomen'ny lalàna ho an'ireo mpiasa any Venezoela).”
Ankehitriny, miasa amin'ny fitaterana izy, na nilaza taminay aza izy fa tsy mihetsika ankehitriny ny fiarany satria misy singa tokony hosoloina. Manana fivarotana kely ao amin'ny tranon'ny reniben'ny vadiny izy sy ny vadiny, izay ivarotany boaty plastika ao ambany fialokalofana iray eo amin'ny làlambe migodana Troncal 10. “Ho an'ireo Breziliana mandalo,” hoy izy.
Tiako ny mpampianatra, tena talentako io. Tiako hiova izao toedraharaha izao ary hiverina hampianatra aho, satria amin'izao toedraharaha ato amin'ny firenena izao, tsy afaka miaina ny mpampianatra.”
Mampianatra ao amin'ny sekoly garabola “Darak Merú” i Nardy. Nametraka fialana izy ny faran'ny taom-pianarana lasa teo, fa mbola hanohy hiasa hatramin'ny volana Desambra satria nilaza izao ny lehibeny, “Raha hiala ianao, ho avela amin'iza ireo ankizy ireo?” Amin'izao, miasa ao amin'ny tsena kely mivarotra gilasy sy manao mofomamy izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/02/21/79105/
 Ny Tantaran'ny Sisintany [Es.]: http://lascronicasdelafrontera.blogspot.com
 hot dogs: https://fr.wikipedia.org/wiki/Hot-dog
 empanadas : https://fr.wikipedia.org/wiki/Empanada
 na tena lafo be tsy takatra mihitsy: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-19/venezuela-the-country-with-four-exchange-rates
 bilaogin'ny Mujeres del Agua Foundation: http://fundacionmujeresdelagua.blogspot.com